Zimbabwe receives its first batch of COVID-19 vaccines from China - Global Times
By Xinhua Published: Feb 16, 2021 08:44 AM
Workers unload COVID-19 vaccines donated by China at Robert Mugabe International Airport in Harare, Zimbabwe, on Feb. 15, 2021. A batch of COVID-19 vaccines donated by China arrived in Robert Mugabe International Airport in Zimbabwe's capital here on early Monday morning. The 200,000 doses of Sinopharm vaccines are the first batch that Zimbabwe has received as it steps up efforts to curb the spread of the COVID-19 pandemic. (Photo by Chen Yaqin/Xinhua)
Zimbabwean Vice President Constantino Chiwenga (L, front) and Chinese ambassador to Zimbabwe Guo Shaochun (R, front) attend the handover ceremony at Robert Mugabe International Airport in Harare, Zimbabwe, Feb. 15, 2021.(Photo by Chen Yaqin/Xinhua)
Photo taken on Feb. 15, 2021 shows COVID-19 vaccines donated by China at Robert Mugabe International Airport in Harare, Zimbabwe. A batch of COVID-19 vaccines donated by China arrived in Robert Mugabe International Airport in Zimbabwe's capital here on early Monday morning. The 200,000 doses of Sinopharm vaccines are the first batch that Zimbabwe has received as it steps up efforts to curb the spread of the COVID-19 pandemic. (Photo by Chen Yaqin/Xinhua)
Zimbabwean president expresses gratitude to China for donating COVID-19 vaccine
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Friday expressed gratitude to China for its offer of COVID-19 vaccines.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Monday expressed satisfaction with progress that has been made in the construction ...
Zimbabwe reported 84 new COVID-19 cases on Monday, bringing the national tally to 10,034, said the Ministry of ...